Nazi Izindlela Ezi-6 Ezisiza Izinhlelo Zamaselula Ekukhuleni Kwebhizinisi | Martech Zone
Njengoba izinhlaka zomdabu ezingumahamba nendlwana zinciphisa isikhathi sokuthuthuka futhi zinciphisa izindleko zentuthuko, izinhlelo zokusebenza zeselula ziba yinto okumele ibe nayo ezinkampanini eziningi ukushayela izinto ezintsha. Ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza lweselula akubizi nakancane futhi akubizi njengoba kwakwenzeka eminyakeni embalwa edlule.
Okukhulisa imboni yizinkampani ezithuthukisa uhlelo lokusebenza ezinezikhungo ezahlukahlukene ezikhethekile nezitifiketi, konke okunolaka ekwakheni izinhlelo zebhizinisi ezingaba nomthelela omuhle kuzo zonke izici zebhizinisi lakho.
Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula Zingakhulisa Kanjani Ibhizinisi Lakho
Nweba i-Customer Base yakho - Ngeke wazi ukuthi umkhiqizo noma insiza yakho yangakini izophenduka isizwe esikude. Uhlelo lokusebenza lwesitolo olumangalisayo, uhlelo lokusebenza lweselula oluhlelekile lungashayela ukukhula komhlaba jikelele kwebhizinisi lakho. Hhayi lokho kuphela, ungenza ukuthi ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula kwenziwe ngokungabizi kakhulu ngasolwandle!
Phakamisa Traffic kanye Brand Ukuqwashisa - Isicelo esiwusizo, esimangalisayo seselula sibeka uphawu lomqondo wakho phezulu. Izicelo zamaselula zingashayela ukuzibandakanya kwesiteshi se-omni, ngisho nokushayela ithrafikhi nokuguqulwa kubuyele kuwebhu yakho, isayithi le-ecommerce, noma iziteshi zenhlalo.
Khulisa Ukuzibandakanya KweKhasimende - izinhlelo zokusebenza zeselula zinamandla kakhulu kunewebhu ephathekayo, nokufinyelela kuzinsizakalo zendawo, eduze kwezokuxhumana kwensimu, ama-accelerometers, amakhamera, imibhobho, kanye namadivayisi we-biometric. Lokho kunganikeza imikhiqizo ukuxhumana okuningi nokuzibandakanya.
Isevisi elula yamakhasimende - Khulisa ukwethembeka kwabathengi ngokunikela umugqa oqondile wokusekelwa ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula. Noma kungukuchofoza-ukushaya ucingo, ukuxoxa, ukwabelana kwesikrini, insiza esiziwe, noma ividiyo esebenzisana nayo, inkampani yakho ingakhulisa kakhulu ukubandakanyeka kwamakhasimende.
Thuthukisa Amandla Wenzuzo - ngokungafani nesitini nodaka obizayo, izinhlelo zokusebenza zeselula zihlala zivulekile amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngeviki, nezinsuku ezingama-365 ngaphandle konyaka. Izicelo zamaselula zingafinyelela futhi kwizikhwama zeselula, zinikeze izindlela ezilula zokugunyaza ukuthenga.
Ukuzibandakanya kwabasebenzi - Imboni ekhulayo yakha izicelo zangaphakathi zabasebenzi zocwaningo, imibhalo, nokuxhumana kwangaphakathi. Lokhu kuqhuba izindlela ezintsha emabhizinisini amakhulu ngokunciphisa ukuxhumana nokucubungula izivimbamgwaqo.
Akekho ongaphika ukuthi izinhlelo zokusebenza zeselula zinganika ibhizinisi lakho amandla. Ingabe unombono wohlelo lokusebenza lweselula?
Tags: ukuqaphela umkhiqizoukuzibandakanya kwamakhasimendeInsizakalo yekhasimendeUkuzibandakanya kwabasebenzinweba isisekelo samakhasimendeukwandisa imaliphakamisa ithrafikhiuhlelo lokusebenza lweselulaisicelo mobileukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselulaImali engenayo
UNitin ungusunguli weMobisoft Infotech, iDigital Solution Company. AbakwaMobisoft Infotech babambisana namabhizinisi abo bonke osayizi ukwakha, ukwenza ngcono nokukala imikhiqizo kuzingxenyekazi zonke ezisebenzisa ubuchwepheshe obuphazamisayo nokuhlanganisa ukwakhiwa, ubunjiniyela kanye nokwenza izinto ezintsha ukwenza amaklayenti ethu aphumelele.
Ngabe iDigital Technology Iyithinta Kanjani i-Creative Landscape